Game ထဲမှာမတည့်ပေမယ့် အပြင်မှာအရမ်းခင်ရတဲ့သူငယ်ချင်းရှိလား? | Codashop Blog MM
Home News Game ထဲမှာမတည...
Game ထဲမှာမတည့်ပေမယ့် အပြင်မှာအရမ်းခင်ရတဲ့သူငယ်ချင်းရှိလား?
ဘော်ဒါတွေအကြား ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှု ပိုပြီးခိုင်မှာလာဖို့အတွက် Codashop မှစီစဥ်ကျင်းပတဲ့ ဒီ Giveaway အစီအစဥ်မှာပါဝင်လိုက်ပါ။ အပြင်မှာအရမ်းခင်သလောက် Game ထဲမှာအရမ်းလောင်လို့ မတည့်တဲ့ဘော်ဒါတွေရှိရင်လှမ်းခေါ်လိုက်ပြီး ဖုန်းဘေလ်အတူကံထူးနိုင်ပါပြီ။
အစီအစဥ်ကြေညာထားသော Facebook ပိုစ့်အောက်တွင်…
(၁) ဂိမ်းအတူဆော့နေကျဘော်ဒါ တစ်ယောက်ကိုမန်းရှင်းခေါ်လိုက်ပါ။
(၂) ပြီးတော့ လောင်တာလေးတွေလျှော့စေချင်တဲ့အကြောင်း စာတိုလေးလည်းရေးပေးခဲ့ပါဦး!
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၉) မှ (၂၅) ရက်အတွင်းသာပါဝင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Game ကစားတဲ့ဘော်ဒါအချင်းချင်း ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုကို ပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင် တိုတိုတုတ်တုတ်နဲ့ အထိမိဆုံးဆွေးနွေးနိုင်ပြီး သတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းမျဥ်းများနဲ့အညီပါဝင်တဲ့ ဘော်ဒါတွေထဲက (၁၀)ယောက်ကို Codashop Myanmar မှ တာဝန်ရှိသူများကရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Comment ပေးတဲ့ဘော်ဒါ (၁၀)ယောက်နဲ့ မန်းရှင်းခေါ်ခံရတဲ့သူ (၁၀)ယောက်ကို ရွေးချယ်ပြီး ဖုန်းဘေလ်(၅,၀၀၀)ကျပ် စုစုပေါင်း (၂၀)ခု လက်ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Codashop Facebook Page သို့သွားရန်
ဤအစီအစဥ်မှရရှိမည့် ဆုလက်ဆောင်ကို ငွေသားဖြင့်လဲလှယ်ခြင်း၊ အခြားသူများကို ပြန်လည်ရောင်းချခြင်းမပြုလုပ်ရ။ Codashop Myanmar မှသိရှိခဲ့လျှင် ဆုလက်ဆောင်ကို ရုတ်သိမ်းခွင့်ရှိသည်။
Previous articleCodashop Global Series March 2022 MLBB Tournament စည်းကမ်းများ
Next articlePUBG Mobile အတွက် EasyPoints နဲ့ ဝယ်ပြီး 52% အထိ UC လက်ဆောင်ရမယ့်အစီအစဥ်ထပ်လာပြီ!